Waa tan Sida Loogu Habboonaado Blog-kaaga Suuqgeynta Macluumaadka | Martech Zone
Khamiis, Juun 24, 2014 Kelsey Cox
Macno malahan nooca ay tahay inaad abuureysid, balooggaagu waa inuu udub dhexaad u ahaadaa dhammaan waxyaabaha suuqgeynta waxyaabaha ku jira. Laakiin sidee loo hubiyaa in habka dhexe ee neerfayaasha loo dejiyo guusha? Nasiib wanaag, waxaa jira xoogaa isbeddello fudud ah oo xoojin doona qaybinta isla markaana hubinaya in kuwa raacsan ay si sax ah u ogaadaan waxa ay tahay inay sameeyaan xiga.
Waa ammaan in la yiraahdo maanta dadku waxay jecel yihiin sawirrada. Xaqiiqdii, maqaal sawirro leh wuxuu ka sarreeyaa 2x inay u badan tahay in lala wadaago maqaal la'aan. Inta badan muuqaal ahaan ka farxinta qoraalkaaga barta ayaa ah, waxay u badan tahay in la wadaagi doono. Hubso inaad badhamadaada wadaagista bulshada aad ugu habboontahay bilowga qoraal kasta waxaadna arki doontaa 7x tixraacyo badan.
Tilmaamaha muuqaalka ee hoose, Safka shanaad iyo Diyaarad ahaan la wadaag qaar ka mid ah talooyinka ku saabsan sida loo hubiyo in balooggaagu la habeeyay oo diyaar u yahay booqdayaasha, wadaagista iyo isbeddelka. Haddii aad rabto inaad waxbadan kabarato kanaallada ugu wanaagsan ee loo qaybiyo waxyaabaha aad ka kooban tahay, sida loogu hagaajiyo kanaal walba natiijooyinka ugu badan, hel meelaynta warbaahinta iyo cabir ROI - waad soo dejisan kartaa Tilmaamaha Ugu Dambeeya ee Qaybinta Mawduuca.
Noo soo sheeg waxa kale ee aad sameyso si aad ugu soo jiidato akhristayaasha bartaada hoose ee faallooyinka.
Tags: blogContent SuuqctainfographicmarketingHagaajintaROISEOwarbaahinta bulshadacaddayn bulsho
Aug 6, 2014 at 3: 21 AM
Hambalyo, waxaan ku abuurayaa baloog ku jira wordpress maqaalkani wuxuu iga caawinayaa inaan wax ka badiyo. In ka badan waxa ku jira garaafyada macluumaadka ayaa sharxaya wax badan. Hadda waxaan ahay mid cad oo ku saabsan sida balooggu u ekaado. Waad ku mahadsantahay boostada.
Aug 26, 2014 at 8: 08 AM
Laakiin nuxurku waa inuu laxiriiraa midigta saxda ah.Haddii uusan xiriir la lahayn waxaa loo isticmaali karaa inuu helo taraafikada aan khusayn
Oktoobar 14, 2014 at 1:27 AM
waad ku mahadsan tahay maqaalka… waxaan aaminsanahay in qoraalkani iga caawinayo inaan hagaajiyo balooggeyga